Marco Tulio Cicero naRobert Graves. Kubva kuRoma uye neRoma muropa. | Zvazvino Zvinyorwa
Marco Tulio Cicero naRobert Graves. Kubva kuRoma uye neRoma muropa.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Vanyori, Novela
Marco Tulio Cicero aigara muRoma, Robert Makuva akatiita kuti tigare Roma. Ivo vaviri vakagovana iro risingaperi Guta sekurudziro uye zvakare vakashaya musi mumwe chete iwoyo, musi waDecember 7. Yekutanga, uye nenzira yakaipa kwazvo, mu 43 BC C., wechipiri muna 1985. Vese vari vaviri, vadzidzisi vezwi nekunyora nemakore zviuru zviviri pakati. Nhasi, mundangariro yake yekusingaperi, ini ndinogovana vamwe vake zvirevo uye zvidimbu Zvemabasa ake.
1.1 Snippets uye zvirevo
1.1.3 Pamusoro pekutaura
2 Robert Makuva
2.1 Ini, Claudio
2.2 Mwarikadzi chena
2.3 Claudius mwari nemukadzi wake Messalina
Zvishoma kutaura nezvemunhu anozivikanwa saiye mutongiWezvematongerwo enyika weRoma, muzivi, munyori uye mutauri. Inofungidzirwa nyanzvi yekunyora uye stylist weprose muchiLatin yeRiphabliki yeRoma, yaigara mune imwe yenguva dzinonakidza dzekare uye pakagovaniswa simba mumazita epasirese sa Kesari kana Pompey. Ivo vedu avo vaifanirawo kuishandura mumazuva edu ekuyunivhesiti zvakare vanoirangarira yayo Catilinaries, semuenzaniso.
Hupenyu hwake nebasa zvakaratidzirwa nehunhu hwake husina kuchengeteka uye hunodakadza, kudzivirira kwake republic uye kurwira kwake hudzvanyiriri hwaKesari. Hunhu ihwohwo hwakaitawo kuti asiyane chinzvimbo chake zvichienderana nemamiriro ezvematongerwo enyika uye zvakamutungamira kumagumo akashata aaive nawo. Mufananidzo wekunyepedzera wenhoroondo yake, pamwe neiyo yenguva yake, inogona kuonekwa mu Roma, inoyevedza HBO nhepfenyuro kubva makore mashoma apfuura.
Snippets uye zvirevo
Inguva yakareba sei, Catilina, paunoshandisa zvisina kufanira kushivirira kwedu? Inguva yakadii isu tichifanira kunge tichiri kutamba chinhu chehasha dzako? Iko kuputika kwekusagadzikana kwako kushinga kuchamira kupi? Chii! Ko kushinga kwako hakuna kudzora kana murindi anotarisa husiku hwese paPalatine Chikomo, kana avo vanochengetedza guta, kana kutya kwevanhu, kana kubvumirana kwevagari vese vakanaka, kana tembere yakavakirirwa iyo inomira Seneti? nhasi, kana nekumeso nekutsamwa kwemaseneta? Hauna kunzwisisa here, hausi kuona here kuti rangano yakawanikwa? Hauoni here kuti rangano yako haisi chakavanzika kune chero munhu uye kuti munhu wese anotofunga kuti yakasungwa?
«Tichifunga mamiriro angu, ini ndakakwanisa kunakidzwa nekuzorora uye kuwana mabhenefiti kubva pairi kupfuura mamwe, nekuda kwezvakasiyana zvezvidzidzo zvave zvichindifadza kubva paudiki (…) Asi nezvose, handina kuzeza kwekanguva kuti kuzviisa pachena kune dutu rinotyisa, uye ini ndingati kunyangwe kune mheni, kununura vamwe vangu vagari uye nekuvimbisa munhu wese, ndisingaregere chero njodzi, hupenyu hune rugare.
«Mutauri wepakati, wandinodaidza kuti ane mwero uye akadzikama, chete nekushongedzera mauto ake zvakakwana, haangatye njodzi dzakajeka uye dzisina chokwadi dzekugona kutaura; Kunyangwe usiri kubudirira zvakanyanya, sezvazvinowanzoitika, hauzove munjodzi huru, zvisinei; nekuti haigoni kuwa kubva kumusoro-soro. Asi uyu mutauri wedu, uyo watinopa kubwinya, uyo ari akakomba, anokurumidza, ane shungu, kana akaberekerwa izvi chete, kana mune izvi akangoshandisa, kana kune izvi chete iye akazviisa, pasina kudzikisira kuwanda kwake mamwe maitiro maviri, anofanirwa nekuzvidzwa kukuru. Kune mutauri akapusa, nekuti anotaura nemazvo uye nehukuru, atova nemusoro, mutauri wepakati, anofadza; "asi izvi zvimwe zvakawanda kwazvo, kana chisiri chinhu chinopfuura izvozvo, kazhinji zvinoita senge zvine musoro."
"Mumaawa engozi ndipo apo nyika inoziva carat yevana vayo."
"Hushamwari hunotangira pahunoperera kana panoperera shungu."
"Handizive kana kunze kwehuchenjeri, ivo vamwari vakapa munhu chinhu chiri nani kupfuura hushamwari."
Uyu Briton akaberekerwa mu Wimbledon, mudetembi yeHondo Yenyika Yekutanga yakashandurwa kuita munyori wenhau, ane chikwereti chake zita rakamusimudzira kubwinya: Ini, Claudio. Hazvigoneke kukanganwa yako kuchinjika mune imwe ye akayeukwa zvakanyanya akateedzana kubva kuterevhizheni. Asi aive mamwe akawanda mabasa enhoroondo aakanyora pasi pedenga re Mallorca avo vakamuona achipfuura aine makore makumi mapfumbamwe.
Hupenyu hwake hwakaratidzirwawo zvinonyadzisa izvo zvakavanzwa kwenguva refu. Asi akasiya nhaka yake nhetembo dzehondo nemazita ezvinzvimbo zvakaita se Mwarikadzi chena, Chikafu chemazana, Belisarius, Hondo yeTrojan, Mambo jesu o Mvere yegoridhe.
Uye pamwe ndakapona nekuti hosha dzaisakwanisa kubvumirana kuti ndeupi wavo angave nerukudzo rwekundipedza. Kutanga, ndakazvarwa nguva isati yakwana, pakuzvitakura kwemwedzi minomwe, uye mukaka wemukoti wangu hauna kugadzikana neni, saka ronda rakaipa rakabuda pamusoro peganda rangu, uye ipapo ndakarwara nemarariya, uye gwirikwiti, zvakandisiya zvishoma matsi. yeimwe nzeve, uye erysipelas, uye colitis, uye pakupedzisira kuora mitezo kwevacheche, uko kwakapfupisa gumbo rangu rekuruboshwe kusvika padanho rekuti ndakapihwa mhosva yekukamhina zvachose.
«Nhasi ibudiriro umo zviratidzo zvikuru zvenhetembo zvinonyadziswa. Mune iyo nyoka, shumba uye gondo zvinowirirana netende rekisi, mombe, salmon uye nguruve yemusango kune fekitari yekukanya; bhiza uye greyhound kunhandare yekubheja uye gwenzi rinoyera kumacheka. Mune iyo Mwedzi unozvidzwa senge isiri satellite yePasi uye mukadzi anoonekwa se "vashandi veHurumende". Imomo mari inogona kutenga chero zvese kusara kwechokwadi uye anenge munhu wese kunze kwanyanduri ane chokwadi.
Claudius mwari nemukadzi wake Messalina
"Hapana chinhu chinoita kuti murume ave neruvengo uye asafadze mumaziso emukadzi segodo."
“Varume vazhinji havana hunhu kana bhinya, havana kunaka kana kushata. Iwo madiki echinhu chimwe uye zvishoma zvechimwe, uye, kwenguva yakareba, hapana chinhu: anozvidza mamirocrates.
Usambofa wakayeuchidza vanhu nezve masevhisi awakavaitira kare. Kana vari varume vanoonga uye vanokudzwa, ivo havangadi chiyeuchidzo, uye kana vasina kutenda uye vasina kutendeseka, chiyeuchidzo chinenge chisina basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Marco Tulio Cicero naRobert Graves. Kubva kuRoma uye neRoma muropa.
Iyo kona yeBruma, anokunda inova yeiyo Torrente Ballester Prize 2017.
Kubvunzana naMalenka Ramos. Mibvunzo gumi kumunyori weThe Whisperer